Ixesha lokuxhalaba malunga nokuKhulelwa kokuKhulelwa - Iingxaki Zokukhulelwa
Ixesha lokuxhalaba malunga nokuKhulelwa kokuKhulelwa
Abafazi abaninzi banamava ukukhulelwa ukukhulelwa , ezinokubangela imibuzo emininzi malunga nokuba oku kuqhelekile kwaye kufuneka banxibelelane nini nomboneleli wabo. Umzekelo, ixesha elinje ngeekram kwiiveki ezingama-35 ezikhulelweyo zinokunxulunyaniswa nokuchasana neBraxton Hicks, okanye zinokuba sisizathu sokukhathazeka.
Ngaba ukukhulelwa kukuxinana kwesizathu sokukhathazeka?
Olunye uhlobo lokukhulelwa okanye amawele esiswini sakho ngexesha lokukhulelwa kuyinto eqhelekileyo. Nangona kunjalo, ukucofa okunzima okuphindwe kabini okanye ukufuna iyeza leentlungu akuqhelekanga. Ukuba une-cramping ebukhali edityaniswe neukukhanya-intloko, ukubonwa / ukopha, umkhuhlane, okanye ukuphelelwa ngamandla, kuya kufuneka unxibelelane nomboneleli wakho ngokukhawuleza. Oku kunokuba luphawu lwengxaki enkulu.
iintlobo zeefern kunye namagama abo
Iimfihlo ezi-6 zaBasetyhini abaKhulelweyo abahle
Ukuqala kweTrimester Cramping
Ukunyathela kwangoko xa ukhulelweinokubangelwa xa ukufakwa komntwana ngaphakathi kwisibeleko. Unokufumana ukubonwa kancinci ngeli xesha. Ukunyanzeliswa kokufakwa kwaye ukubonwa kufuneka kwenzeke malunga nexesha oqhele ukufumana ngalo ixesha lakho.
Nangona kunjalo, ukukhulelwa kwangaphambi kokukhulelwa ngokudityaniswa nokubonwa kunokuba ngumqondiso wokukhulelwa kwesisu okanye ukukhulelwa kwe-ectopic. Ukuze nje ukhuseleke, ukuba uqaphela ukuba cramping idityaniswe nokubona okanye ukopha, kuya kufuneka unxibelelane nomboneleli wakho wokhathalelo.
Ukunyanzelwa kweTrimester yesibini
Abasetyhini abaninzi bafumana amahlaba okanye amawele kwizisu zabo kwikota yesibini . Oku kuhlala kubangelwa yintlungu ye-ligament. Intlungu yeLigament ivakalelwa ngokungathi kukuqaqanjelwa sisisu okanye ukubola okubukhali ecaleni. Uninzi lwabafazi bayaqaphela iintlungu zeligament xa bevuka esihlalweni okanye bekhohlela.
Ukuba intlungu ye-ligament iyakukhathaza, umboneleli wakho unokukwazi ukunceda ngeengcebiso. Unokuthathela ingqalelo:
indlela yokwazisa umntu ngokufa nge-imeyile
Iphedi yokufudumeza (nokuba ngumbane okanye iphedi yeThermacare)
Ibhola yokubeleka / yokuzivocavoca uhleli
UKUYAumqamelo phakathi kwemilenze yakhongelixa ulele
Ukuthatha ixesha lakho xa umile ebhedini okanye esitulweni
Ukuhlamba ibhafu / ishawa eshushu
Ukunyathela iTrimester yesithathu
Abasetyhini abaninzi bafumana ama-cramping athambileyo ekupheleni kwekota yesibini kwaye nangabo kwikota yesithathu . Le cramping ikwabizwa ngokuba ne-Braxton Hicks contractions. Ezi zingqinisiso zihlala zingenabuhlungu, nangona zinokungonwabi kwabanye abantu basetyhini kwaye zihlala zididekile ngumsebenzi wokwenyani. Ukuthamba okufana nokuya exesheni ngaphandle kwempawu ezithile malunga neveki ye-34 okanye iveki yama-35 kunokubonisa ukuba umzimba wakho ulungele ukuzalwa. Ukuthamba okufana nokuya exesheni kwiiveki ezingama-35, ke ngoko, akunakuba sisizathu sokukhathazeka. Ukuba i-cramping yakho idityaniswe ne-backache, uxinzelelo, okanye ukubonwa, unokuba usebenza. Ukuba ungaphantsi kweeveki ezingama-37 ukhulelwe, kuya kufuneka unxibelelane nomboneleli wakho okhathalelayo ngokukhawuleza kuba usenokuya emsebenzini wokuqala.
Ukuxinana kokukhulelwa emva kweveki yama-37 luphawu oluhle lokuba uya kubeleka. Abasetyhini abaninzi baxela kwangaphambili ukuba bayafana neempawu zokuya exesheni. Ukuba usebenza kwangoko kwaye ukucuthana akukabi kubi kakhulu, unokufuna ukuzama la manyathelo alandelayo entuthuzelo:
Ukuhlamba okanye ukuhlamba
Ukuhamba ngobumnene okanye ukuqubha ngobunono
Ukuhlala uxakekile kwaye uziphazamise ngemisebenzi yasekhaya, ukuthetha, iimuvi, okanye iincwadi
Ukufumana umyalezo kwiqabane lakho, ilungu losapho, okanye i-doula
Ukuhlala kwibhola yokubeleka
Ukuba usebenza ngokukhawuleza, ungalibali ukutya ngaphandle kokuba umboneleli wakho ukhathalele. Ukutya okuthuthuzelayo okunje nge-smoothies, umhluzi wenkukhu, okanye i-toast inokuba intle ngeli xesha. Kukwabaluleke kakhulu ukuba usele amanzi amaninzi.
Uzihlamba njani iisokisi zoboya beemerino
Ndifanele ndiNxibelelane nini nogqirha wam?
Ukuba ufumana ukukhulelwa kwaye awuqinisekanga ngesizathu, kuya kufuneka unxibelelane nomboneleli wakho. Unokuqinisekisa ukuba wena kwaye ulusana lusempilweni.
Ukutya Plans And Programs Iholide Party Themes Uyakhuthaza Jew Jewelry Kwabafazi Ngokuhlwa Wear Ukukhusela Your Credit
ungaxela njani ukuba i-louis vuitton isipaji iyinyani
Amantshontsho ekati asimahla athengiswa kufutshane nam